असोज ५, काठमाडौं । साताको तेस्रो कारोबार दिन मंगलवार बजार अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा १३ दशमलव ८३ अंक अर्थात् शून्य दशलमव ५१ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।
यो दिन नेप्से परिसूचक २ हजार ७१२ दशमलव शून्य ७ विन्दुमा पुगेको हो । यस अवधिमा कारोबारमा आएका २२३ ओटा कम्पनीको १ करोड ५३ लाख ६ हजार ६१ कित्ता शेयरको ९५ हजार ६४६ पटकमा रू. ७ अर्ब ३६ करोड ४७ लाख ९८ हजार बरावरको शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
कारोबारमा आएका २२३ ओटा धितोपत्र मध्ये मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा मंगलवार ९ दशमलव ९९ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. १ हजार ८८ दशमलव ७० पुगेको हो ।
त्यसैगरी दोस्रोमा रू रू जलविद्युत् परियोजनाको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ५ दशमलव ७८ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. १ हजार २२७ पुगेको हो ।
त्यसैगरी, सबैभन्दा बढी शेयरमूल्य घट्नेमा सानिमा लार्ज क्याप फण्डको इकाई अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ३ दशमलव ४३ प्रतिशत घटेको छ । इकाई मूल्य प्रतिइकाई रू. ९ शदमलव ५६ कायम भएको हो । त्यस्तै सर्वाधिक शेयर कारोबार गर्नेमा अरुण भ्याली हाइड्रोपावर रहेको छ ।
कम्पनीको रू. २५ करोड ४४ लाख १५ हजार बरावरको शेयर खरीदविक्री भएको हो । कारोबारमा आएका १३ ओटा समूहमध्ये सबैभन्दा बढी होटल एण्ड टुरिजम समूहको परिसूचक २ दशमलव ३८ प्रतिशत बढेको छ ।
त्यसैगरी, समूहगत परिसूचक बढ्नेमा विकास बैंक समूहको शून्य दशमलव ५६ प्रतिशत, हाइड्रोपाव समूहको शून्य दशमलव ७६ प्रतिशत, निर्जीवन समूहको शून्य दशमलव ६ प्रतिशत, अन्य समूहको शून्य दशमलव ७९ प्रतिशत, माइक्रोफाइनान्स समूहको शून्य दशमलव २८ प्रतिशत, जीवन विमा समूहको १ दशमलव ३३ प्रतिशत र लगानी समूहको परिसूचक १ दशमलव ३७ प्रतिशत बढेको छ ।
त्यसैगरी, समूहगत परिसूचक घट्नेमा व्यापार समूहको १ दशमलव ६१ प्रतिशत, वित्त समूहको शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको शून्य दशमलव २९ प्रतिशत र म्युचुअल फण्ड समूहको परिसूचक शून्य दशमलव शून्य १ प्रतिशत घटेको हो । पछल्लो समय लगातार पाँच दिन घटेपछि बजार मंगलवार बढेको हो ।
लगातार पाँच दिन घटेपछि आज नेप्सेको केन्डिल स्टिक चार्ट लङग लेग्ड डोजी आकृती बनेको छ । यस्तो आकृतीले लगानीकर्तालाई पर्ख र हेरको अवस्था सृजना भएको छ ।
यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताले विगतमा राम्रो लाभांश वितरण गर्दै आएका र राम्रो आधारभूत पक्ष भएका कम्पनीहरुमा लगानी गरेमा अल्पकालिनभन्दा पनि दीर्घकालिन लगानी गरेमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने गर्छ ।
०.८७ % ले घट्यो बजार, कुल ३ अर्ब ६३ करोडको कारोबारमा नबिल बैंकको सर्वाधिक हिस्सा [२०७८ असोज, २५]
ग्लोबल आइएमई समुन्नतसहित ५ ओटा धितोपत्रमा उच्च खरीद माग[२०७८ असोज, २५]
शतप्रतिशत प्रतिफलको प्रभाव : ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना - १ को मूल्यमा सर्किट[२०७८ असोज, २५]
प्रि - ओपन सेसनमा ५.०३ अंकले बढ्यो नेप्से परिसूचक [२०७८ असोज, २५]
१८.५३ अंकले घट्यो नेप्से, रू.४ अर्ब ४९ करोड बराबरको शेयर खरीदविक्री [२०७८ असोज, २४]